iminyaka 2 2 kwiiveki ezidlulileyo #141 by PAYSON
Yintoni imfihlelo okubhabha lo moya phezu imizuzu 5-6 ngaphandle ukusilela ngokupheleleyo injini? Hayi injini nje omnye ngexesha, kodwa zonke ngexesha elinye. Ndiye wayesoloko indawo entliziyweni yam ngenxa yabo, ingakumbi xa ngokupheleleyo izimvi nesinqanawa, uhlobo recon (kunye big kukujikeleza radar disc) iphaphazela phezu kwendlu yethu Naval Station Air utata wam wayemi.
iminyaka 2 2 kwiiveki ezidlulileyo #142 by Rolando
Mna ingxaki efanayo kunye nabahlobo bam. Kukho esinye isisombululo elihle: lekroza yesiqhelo (hayi super) Undizela ngaphandle iimpazamo ...
iminyaka 2 2 kwiiveki ezidlulileyo #144 by PAYSON
Enkosi impendulo yakho. Ndiyazi ukuba kwi imiyalelo - to - ukusebenza, (phakathi kwi "funda-ngam) ukuba idlule i ukusetyenziswa ethile RPM ilandelayo ngexesha elinye, kodwa loo nto ayinakwenzeka .... ayifiki nje emhlabeni, kufuneka onke amandla ukuhlala up. Ngoku konke endinako ukuyenza bana phandle ukwabelana ngayo pix nani guys.
Kwakhona, siyabonga PAYSON
I-2 iminyaka ye1 iveki edlulileyo #161 by Gh0stRider203
I-2 iminyaka ye1 iveki edlulileyo #162 by PAYSON
wazama nje beziya cowl evulekileyo .... emva ashushu-up yena akhwela kade 4K, wajika wabuyela kwisiseko. Isibhozo kungena moya, iigeji cleaner waqalisa ukuya kwenye esezantsi mnye. Soooo, emva kwemizuzu 8, ewuphethe njengelitye. Kodwa, hey, loo nto irekhodi. Enkosi info ke, Ndiyayibulela.
I-2 iminyaka ye1 iveki edlulileyo #165 by Gh0stRider203
kumaqela FB "mbalwa" kuba FSX Mna. Ndiza ukubuza ngeenxa zonke ngenxa ya Nokuba ndafumana buddies ezimbalwa abo nobuchule iphaphazela B-17, ngoko ndiza khangela kunye nabo I uConnie intaka elandelayo mna nongeza izithuthi i VA kaThixo, xa ndifumana Ezinye iintaka zethu sihlawulelwe.
I got kwanele ngoku ukuze ahlawule elo 767-200ER, nto leyo ishiya 748Fs ezimbini kunye 772LRs ezimbini. 744LCF yethu 748s abaziingcibi zethu eziphambili imali, nangona 772LR xa moya payload efanelekileyo kuvela phezulu nga kungenisa ukuhlawulwa kunokuba elithozamisayo lol Enyanisweni lowo endilisekileyo elilandelayo ayikho kude Agasti kwaye ke ngelo xesha, ndingabi zonke iintaka nomvuzo lol
I-2 iminyaka ye1 iveki edlulileyo #178 by PAYSON
Wow Ghost ... izandi okulungileyo enkosi inkxalabo. Aaaaah,. B-17 kaThixo Ndidla Wamkhwelisa omnye naliphi na ithuba Ndifumana. Ukuba ukhe ufumane ithuba ukuze ndikhwele enye eyaziwa ngokuba "I Aluminium lisibekele", ukwenza oko. (Ukuba une sele) Waye yakhiwa emva kwexesha emfazweni kunye wasiwa eNgilani. Njengoko isiphelo ubuya, imfazwe yaphela phezu ekufikeni kwakhe. Ngoko ke, akaze asetyenziswe imfazwe. Yinto uzuke ngaphakathi nangaphandle. Zonke yokuhambahamba ngomthi kunye nomsila gun Sibona ngathi zange isetyenziswe. Jonga phezulu kumgca ukubona oko eziya kujikeleza apho. Ukuba uzokufumana ukukhwela, kuba ngabokuqala emgceni (I waza wabona ukuba ususe kanye nomhlaba isihlalo jump ilungelo emva pilot), yaye ngokuqinisekileyo kuzisa yecamera yakho elungileyo.
I-2 iminyaka ye1 iveki edlulileyo #186 by tnig
Ukusuka ifayile README ngenxa uConnie. Landela la kwaye uza kulunga. Akuyomfuneko ukuba balungise prop ukuba RPM kufanelekile ukuba ningabi naxhala nina lembandezelo.
(5)-Cofa ekunene itshekhi-uphawu simicon ukubiza up i eneenkcukacha window status
ebonisa kubalulekile injini kunye flight readouts.
(7) ukusilela Injini kusenokwenzeka ukuba kwenzeka xa iinjini fambisiwaka kwi
2800 + RPM ixesha elide yexesha (lumkani ukuba eli ngokukhethekileyo
emva kokuba uthathe-off) okanye ukuba ulawulo yeSpark = kwangaphambili kwi 2400 + RPM. kuxhomekeka
phezu kwendawo, iinjini banokusilela kwisithuba imizuzu emithathu ukuya kwemihlanu. Sebenzisa i
Ipropu pitch master lever okanye simicon kwelizwi Engine ukulungisa RPM njengoko
efunekayo ukuze imeko yangoku flight (jonga uluhlu). Kwi
panel Status, lo readout injini hp esebenzisa ngayo iikhowudi umbala ilandelayo:
amhlophe - Kulungile, akukho ingozi ukusilela injini;
yellow - setting amandla yangoku iya kubangela umonakalo ukuba ekhohlo elide kakhulu
kule zoqwalaselo (emva uhlangabezane umva okanye ukulungelelanisa
RPM iya kuhlala omthubi de kusilela lwangaphakathi injini
Counter kukubuyela zero (ingathatha imizuzu embalwa)
red - inyathelo ngokukhawuleza efunekayo - ukunciphisa umcephe kunye pitch edlala ngaphakathi.
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: tdhelpline
I-2 iminyaka ye1 iveki edlulileyo #187 by PAYSON
tnig .... enkosi info, kodwa umbuzo omnye - ngaba wakha ngokwenene wenze le nto? Akukho mthetho, kodwa ndazama ukuba bangaze yakhwela ezidlulileyo 1200 ft. Obuhle-up on evulekile. Mhlawumbi nje kum, kodwa lowo kuphela Ndinengxaki (35 - 45 moya kule ndawo). Oko kuquka ezinye ezinkulu kwendiza, lockheed, okanye baseRashiya kufuneka anikele. Ndicinga ndadibana umdlalo wam sadla kum. Ndicinga "x brand" enye ukuze anikele. Ndiya kumnika yona ibe go, ukuba ndithe ndasilela (RIP), xelela umfazi wam waba tye.
Kwakhona, wabulela, ngokuphathelene, PAYSON
I-2 iminyaka ye1 iveki edlulileyo #188 by Gh0stRider203
owenza lo Super uConnie? Ukuze kufuneka ujonge kwi ngokwam lol